UNESCO oo war ka soo saartay Dilalka suxufiyintii ugu danbeysay ee Caalamka – SBC
UNESCO oo war ka soo saartay Dilalka suxufiyintii ugu danbeysay ee Caalamka
Posted by Webmaster on July 12, 2013 Comments
Hay’ada qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo waxbarashada Unesco ayaa maanta waxaa ay soo qaadatay dilalka saxafiyiinta ee ka dhaca wadamada qaarkood,gaar ahaan saddex wadan oo Unesco u aragto in ay dhibaato ku haysto xoriyada saxaafada.
“saxafiyiinta waxaa ay dhib ku qabaan in ay shaqeeyaan wadamo badan oo caalamka ah balse hadda waxaan soo qaadaneynaa dilalkii ugu danbeyay ee ka dhacay caalamka iyo sida aysan u jirin dabagal rasmi ah oo lagu sameynayo dadka ka danbeyay dilalka suxufiyinta ee dhacay Bishan” ayaa lagu yiri war cad oo lagu daabacay Unesco.
Akhmednabi Akhmednabiyev waa Tafatiraha wargeys madax banaan ka soo baxa Magalada Makhaskara ee dalka ruushka,kooxo hubeysan ayaa Talaadadii ku toogtay gudaha gaadhigiisa, mana jirto cid loo soo qabtay waxana suxufigaasi uu noqonaya kii labaad ee sanadkan lagu dilo Ruushka.
Waxaa sidoo kale mucjiso ahaa dilkii loo geystay Liibaan Cabduli Faarax oo 7-bishan lagu dilay gaalkacyo waxaana mar kale ay Cadeyneysaa sida aysan wali u jirin cid xaqiijin karta amaanka guud ee saxafada somalida oo dhibaato ku qabta qawleysato dilaya.
Mr:Faarax ayaa sida Unesco sheegeyso waxaa uu ka shaqeynayay Idaacada Somali Broadcasting Corporation (SBC) iyo Taleefishin fadhigiisa yahay London Oo Kalsan Tv la yiraah,waxana Loo sheegay UNESCO in lagu dilay Baraxley oo ka mid ah Koonfurta Gaalkacyo.
Mario Ricardo Chávez oo ahaa suxufi u dhashay dalka Maxico ayaa waxaa lagu dilay Xuduuda mareykanaka ee la wadagaan Maxico saxafigan oo la dilay 26-juun ee sanadkan.
Dhamaan dhacdooyinka kor lagu xusay waxaa ay muujinayaan sida wadamadan uga hooseeyaan heerka wax ka qabashada dilalaka is daba jooga ah ee ka dhacay gudaha wadankooda ayaa lagu soo gabagabeyay warkani ka soo baxay UNESCO.